Tue, Jul 14, 2020 at 3:38am
लोकतन्त्रको रक्षामा जोडः स्वास्थ्यमन्त्री यादव
राजविराज, १४ कात्तिक उपप्रधानमन्त्री एवम स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले सङ्घीय लोकतन्त्रको रक्षाका लागि समाबेशीको सिद्धान्तअनुसार पिछडिएका समुदायलाई प्रतिनिधित्व गराउन सरकार अघि बढिरहेको बताउनुभएको छ । प्रेस नेपाल सप्तरीद्वारा आज राजविराजमा आयोजना गरेको शुभकामना आदानप्रदान एवम पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उहाँले जनतालाई सङ्घीयता महसुस गराउन केही कुरा बाँकी रहेकाले संविधान संशोधन गरेर भए पनि ती कुरा पुरा गर्ने प्रक्रियामा सरकार लागि परिरहेको बताउनुभयो..
काठमाडौँ, १४ कात्तिक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ग्राण्डी अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन् । ग्राण्डी अस्पतालका मेडिकल निर्देशक डा. चक्रराज पाण्डेले प्रधानमन्त्री ओलीको मृगौलाको डायलाइसिस सकिएकाले डिस्चार्ज गर्न लागिएको बिहीबार बेलुका पत्रकार सम्मेलन गर्दै जानकारी दिएका थिए । उनले डायलाइसिसपछि प्रधानमन्त्री निदाएकाले केहीबेरपछि डिस्चार्ज गरिने बताएका थिए । प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि बुधबार बिहान ग्राण्डी अस्पताल लगिएको थियो । त्यहाँ उनको डायलाइसिस गरिएको थियो..
काठमाडौँ, १४ कात्तिक चोट लाग्दा मात्र मस्तिष्कलाई हानि पुग्ने हैन । दिनभरिको क्रियाकलापका क्रममा हामीहरूले गर्ने गल्तीले मस्तिष्कमा खराब असर पर्छ । हामीले दिनभरीमा धेरै यस्ता गल्तिहरु गर्छाैँ जसको कारण हाम्रो दिमागमा नराम्रो असर पर्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा मेमोरी पावर कमजोर भएर मस्तिष्कमा असर पर्ने समस्या अाउनसक्छ । दिमागले सही तरिकाबाट काम गर्न सक्दैन । यदि यी गल्तिहरुलाई समयमा नै सुधार ल्याउन..
गलकोट, ८ कात्तिक बागलुङ बजारमा अयोजना गरिएको दुईदिने बृहत् स्वास्थ्य शिविरमा सात हजार ९८३ बिरामीले सेवा लिएका छन् । ताइवान र नेपालका करीब ३०० स्वास्थ्यकर्मीको सहभागितामा धवलागिरि अञ्चल अस्पतालमा बुधबार र बिहीबार दुईदिने निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरको आयोजना गरिएको थियो । शिविरको पहिलोदिन बुधबार तीन हजार ८९३ र बिहीबार तीन हजार ९० ले उपचार, परामर्श तथा आषौधि सेवा लिएका अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष..
शरीरमा देखिने निलो दाग बोक्सिले चुसेको होइन, यी हुन् कारण र उपचार विधि
काठमाडौँ, ८ कात्तिक कहिलेकाहिं शरीरमा कुनै जनवारले टोके जस्तै लाग्ने कालो वा गाढा निलो दाग देखिने गर्छ । यस्तो दाग शरीरमा कसरी भयो ? आश्चर्य लाग्न सक्छ । कसैले त यस्ता दागलाई बोक्सीले टोकेको समेत भन्ने गर्छन् । बिहान उठ्दा शरीरमा निलडाम देखिए ‘बोक्सीले टोकेको’ भ्रम पाल्ने गरिन्छ । तर, विशेषज्ञहरु भने शरीरमा देखिने यस्ता दाग वा निल डाम आन्तरिक रक्तश्रावका कारण..
चितवन, ७ कात्तिक । स्वास्थ्य कार्यालय चितवनले डेङ्गुका कारण थप एकको मृत्यु भएको जनाएको छ । कार्यालयले दिएको जानकारीअनुसार चितवन मेडिकल कलेजमा उपचाररत ३१ वर्षीया एक महिलाको मृत्यु भएको हो । कार्यालयका प्रमुख दीपक तिवारीका अनुसार लमजुङ दूधपोखरी–२ विचौर स्थायी घर भई नवलपुरको गैँडाकोट निवासी सरस्वती न्यौपानेको कात्तिक ४ गते बिहान उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो । यसअघि एक जनाको डेङ्गु र..
के हो बोन अट्याक ? यसबाट कसरी बच्ने ?
काठमाडौं, ६ कात्तिक तपाईलाई थाहा नभएको हुन सक्छ चोटपटक विना पनि हड्डी भाँच्चिने समस्या आउन सक्छ । यदी यस्तो समस्या छ भने तपाईलाई बोन अट्याक भएको हुनसक्छ । बोन अट्याक भनेको ओस्टियोपोरोसिस भन्ने एक प्रकारको हड्डी मक्किने रोगका कारण चोट पटक नलाग्दा पनि आफै हड्डि भाँचिने समस्या हो । बोन अट्याक भएका व्यक्तिको हिपको हड्डी भाँचिने समस्या हुन्छ । यसको उपचारका लागि टटिल..
काठमाडौँ, ६ कात्तिक । काठमाडौँ र ललितपुर जिल्लामा रगतको अभाव देखिएको छ । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीद्वारा सञ्चालित रक्त सञ्चार सेवा केन्द्रले सहजरुपमा रगत उपलब्ध गराउन नसक्दा ती दुई जिल्लामा रगतको अभाव देखिएको हो । वर्षेनी चाडबाड र चाडबाडपछिको समयमा उपत्यकामा रगतको अभाव देखिने गर्छ । यसलाई सम्बोधन गर्न खासै ध्यान दिएको देखिँदैन । रक्त सञ्चार सेवा केन्द्रले रगतको अभाव भएकाले रक्तदान गर्न..
काठमाडौँ, ४ कात्तिक संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जनसङ्ख्या कोष (युएनएफपीए)का कार्यकारी निर्देशक एवं संयुक्त राष्ट्र सङ्घका उपमहासचिव डा नतालिया कनेमले सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य, परिवार योजना तथा महिला सशक्तीकरणका क्षेत्रमा नेपालले गरेका कामको उच्च सराहना गर्नुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “ती क्षेत्रमा नेपालले अवलम्बन गरेका नीति र लगानीले धेरै राम्रा रहेका छन् । यसले नेपाली महिला र किशोरीको जीवनस्तरमा आमूल सुधार ल्याउने मैले..
काठमाडौँ, ४ कात्तिक पानी मानव शरीरका लागि नभइ नहुने पदार्थ मध्य एक हो । दैनिक ४–५ लिटर पानी पिउन चिकित्सकहरुले सुझाव दिए पनि मानिसहरु पानी पिउनेतर्फ त्यति ध्यान दिँदैनन् । पानी नपिउँदा शरीरमा विभिन्न किसिमका रोगहरुको संक्रमण देखा पर्छ । आज हामीले शरीरमा पानीको मात्रा कम हुँदा के कस्ता लक्षण देखिन्छन् ? त्यस विषयमा यहाँ प्रस्तुत गरेका छौं- टाउको दुख्छ कुनै पनि रोग तथा..
काठमाडौँ, ३ कात्तिक । राष्ट्रिय भिटामिन ‘ए’ कार्यक्रमअन्तर्गत बालबालिकालाई भिटामिन ए, जुकाको औषधि तथा पाखुराको नाप लिने कार्य एक साथ सम्पन्न भएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलयको समन्वय र सहकार्यमा देशका सबै पालिकामा यही कात्तिक कात्तिक २ र कात्तिक ३ गते सो कार्यक्रम एक साथ सञ्चलन भएका थिए । कार्यक्रमअन्तर्गत जन्मेको छ महीनादेखि पाँच वर्षसम्मका करीब २७ लाख बालबालिकालाई भिटामिन ‘ए’..
काठमाडौँ, ३ कात्तिक पछिल्लो समय गरिएको एक अध्ययनले चियाका पारखीहरु सचेत हुनु पर्ने एउटा निष्कर्ष निकालेको छ । त्यो हो– जो तातो चिया पिउँछन्, उनीहरुमा क्यान्सर हुने सम्भावना ९० प्रतिशतले बढी हुन्छ । झन् जो मानिसहरु ७५ डिग्री सेल्सियस तापक्रमको चिया पिउँछन्, उनीहरुमा यस्तो सम्भावना दुई गुणा बढी हुन्छ । अमेरिकाको क्यान्सर सोसाइटीले गरेको अनुसन्धानअनुसार कपमा चिया राखेको चार मिनेटपछि मात्र पिउने..
काठमाडौँ, २ कात्तिक । त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा गरिएको कलेजो प्रत्यारोपण कार्यले सफलता प्राप्त गरेको छ । शुक्रबार रुपन्देहीका ५२ वर्षीय पुरुष बिरामीलाई उहाँका २७ वर्षीय छोराले प्रदान गरेको कलेजोले प्रत्यारोपण सफलता प्राप्त गरेको हो । प्रत्यारोपित बिरामीको स्वास्थ्य अवस्था ठीक रहेको अस्पतालले जनाएको छ । अस्पतालका प्रत्यारोपण चिकित्सक प्राडा रमेशसिंह भण्डारीको टोलीले करीब आठ घण्टा लगाएर सो प्रत्यारोपण गरेको थियो ।..
विराटनगर, २ कात्तिक । छ महीनादेखि माथि पाँच वर्षमुनिका बालबालिकालाई खुवाइने भिटामिन ‘ए’का लागि सबै तयारी भइसकेको प्रदेश नं १ सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । आज र भोलि खुवाइने भिटामिन ‘ए’सँगै जुकाको औषधि पनि खुवाइने मन्त्रालयका स्वास्थ्य महाशाखामा कार्यरत सामुदायिक नर्सिङ अधिकृत केसु काफ्लेले जानकारी दिनुभयो । जुकाका औषधि एक वर्षमाथि पाँच वर्ष मुनिकालाई खुवाइने तयारी भएको हो । भिटामिन ‘ए’..
काठमाडौँ, १ कात्तिक राष्ट्रिय भिटामिन ‘ए’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक तयारी पूरा भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयको समन्वय र सहकार्यमा देशका सबै पालिकामा यही कात्तिक २ र ३ गते सो कार्यक्रम सञ्चलन हुँदैछ । कार्यक्रमअन्तर्गत जन्मेको छ महीनादेखि पाँच वर्षसम्मका करीब २७ लाख बालबालिकालाई भिटामिन ‘ए’ क्याप्सुल, एक वर्षदेखि पाँच वर्षमुनिका २४ लाख बालबालिकालाई जुकाको औषधि (अल्वान्डाजोल), छ..
काठमाडौँ, ३० असोज आजभोलिको व्यस्त जीवनशैलीमा दिमागलाई अत्यधिक भार पर्छ । यसैले गर्दा कहिलेकांही हामी ससाना कुराहरु सम्झिन नसकेर पनि चिन्तित भइरहेका हुन्छौँ । यदि तपाईंमा यो समस्या छ भने यहाँ बताइएका उपाय अपनाउनुस् । भिजाइएको बदाम प्रत्येक रात १० वटा बदाम पानीमा भिजाएर राख्नुस् । बिहान उठेर त्यसको बोक्रा निकालेर मसिनो पेस्ट बनाउनुस् । अनि त्यसमा मह हालेर उमाल्नुस् । त्यसपछि त्यसलाई..
काठमाडौँ, २९ असोज । देशका सबै स्थानीय तहले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयसँगको समन्वय र सहकार्यमा कात्तिक २ र ३ गते राष्ट्रिय भिटामिन ‘ए’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएका छन् । कार्यक्रमअन्तर्गत जन्मेको छ महीनादेखि पाँच वर्षसम्मका करीब २७ लाख बालबालिकालाई भिटामिन ‘ए’ क्याप्सुल, एक वर्षदेखि पाँचवर्षमुनिका २४ लाख बालबालिकालाई जुकाको औषधि ९अल्वान्डाजोल०, छ महीनादेखि दुई वर्षभित्रका चारलाख बालबालिकालाई बालभिटा र पाँच वर्षमुनिका २७..
पर्शुरामधाम, २८ असोज अहिले डडेल्धुरा अस्पताल एक चिकित्सकको भरमा चलिरहेको छ । सङ्घीय सरकारको मातहतमा रहेकोे अस्पताल कर्मचारी समायोजनको चपेटामा पर्दा झनै समस्यामा परेको छ । सरकारले स्तरोन्नति गरी सेवा सुविधासहितको अस्पताल घोषणा गरे पनि पछिल्लो समयमा यसको सेवा खस्कँदै गइरहेको छ । चिकित्सक, जनशक्ति र भौतिक संरचनाको अभावले गर्दा अस्पतालले दिनुपर्ने जति सेवा दिन सकिरहेको छैन । टिम अस्पतालका रुपमा परिचित..
काठमाडौँ, २७ असोज मानव शरीरलाई घात गर्ने तत्व (एन्टिबडी) निकाल्ने थेराप्युटिक प्लाज्मा एक्स्चेञ्ज प्रक्रिया अब नेपालमै सम्भव भएको छ । नेपाल मेडिसिटी अस्पतालले मिर्गौला, मुटु र फोक्सोमा समस्या देखिएका एक ३३ वर्षीय पुरुष बिरामीको सफल उपचार गरेपछि यो उपचार प्रक्रिया सम्भव देखिएको हो । रगतमा हुने तरलता र रक्तकोशबाट प्रोटिन निकाली अर्को प्लाज्मा राख्ने यो प्रक्रियाका लागि करीब दुई घण्टा लागेको थियो ।..
काठमाडौँ, २६ असोज चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै पटक पटक अनशन बसेका डा. गोविन्द केसीले सरकारी सेवाबाट उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाश पाउने भएका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालय, शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा वरिष्ठ हाडजोर्नी तथा नशा रोग विशेषज्ञका रुपमा उनी कार्यरत थिए। ६३ वर्षीया डा. केसीले सोमबारदेखि अवकाश पाउने अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रेमकृष्ण खड्गाले जानकारी दिए। यस अघि डा. केसीको नागरिकता, एसएलसीको चारित्रिक प्रमाणपत्र र..
शनिबार, असोज २५, २०७६ साल
वासिङ्टन, २५ असोज । अमेरिकामा विद्युतीय चुरोट तथा अन्य धुमपानका कारण १३ सय जना विरामी भएर अस्पताल भर्ना भएका छन् । विरामी भएका मध्ये आधा विरामीलाई अति सघन कक्ष (आइसियु) मा राखेर उपचार गराइएको अधिकारीहरुले जनाएका छन् । यही समस्या कारण पछिल्लो सयममा मात्रै २६ जनाको मृत्यु भइसकेको अमेरिकाको केन्द्रीय प्रकोप नियन्त्रण तथा उद्धार केन्द्रले जनाएको छ । केन्द्रका उप निर्देशक अन्ने स्चुचान्तले शुक्रबार..
काठमाडौँ, २५ असोज यदि तपाईलाई दिनको शुरुवात एक कप चियाबाट गर्ने वानी परेको छ भने अदुवा चिया तपाईको लागि निकै फाइदाजनक हुनेछ । अदुवा हालेको चिया स्वादका साथ स्वास्थ्यका लागि निकै फाइदाजनक हुन्छ । अदुवाको चिया पिउदा पाचक क्रियामा सुधानर आउनेछ । धेरै खाना खादा अदुवाले पचाउन सहायता गर्छ । अदुवाको चियाले पेटको समस्या समेत कम हुन्छ । पेटमा भएको जलनसमेत हट्छ । यसमा..
शुक्रबार, असोज २४, २०७६ साल
हेटौँडा, २४ असोज मकवानपुर जिल्लाको केही गाउँपालिका, थाहानगरपालिका र हेटौँडा उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा अहिले डेङ्गु रोगको प्रभाव घट्दै गएको छ । मकवानपुरमा गत साउनको पहिलो हप्तादेखि यही असोजको २३ गतेसम्म एक हजार ६०० डेङ्गु रोगीको उपचार भइरहेको स्वास्थ्य कार्यालय मकवानपुरले जनाएको छ । रोगीको काठमाडौँ, ललितपुर, चितवनको भरतपुर र हेटौँडाको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ । डेङ्गु करीब ३० प्रतिशत बिरामी..
सोमबार, असोज २०, २०७६ साल
कञ्चनपुर, २० असाेज । कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका १८ मा रहेको महाकाली अस्पतालमा चिकित्सकको अभाव भएको छ । दरबन्दीका चिकित्सकको पदपूर्ति नहुँदा बिरामीलाई अन्यत्र ‘रिफर’ गरिदैँ आएको छ । चिकित्सककै अभावमा बिरामीले भारतीय निजी अस्पतालमा चर्को मूल्य तिरेर उपचार गराउनु परेको छ । अस्पतालमा २८ जना चिकित्सकको दरबन्दी भएपनि प्रसूति रोग विशेषज्ञ हरिकुमार श्रेष्ठ र छाला रोग विशेषज्ञ शम्भु जोशी गरी दुई चिकित्सक..
काठमाडाैं, २० असाेज । महिला कर्मचारीमाथि बलात्कार प्रयासको आरोपमा पक्राउ परेका निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरामा स्वास्थ्य समस्या देखिएको छ। प्रहरी स्रोतका अनुसार सिंहदरबारस्थित महानगरीय प्रहरी वृत्तको हिरासत कक्षमा रहेका उनलाई उच्च रक्तचापसँगै श्वासप्रश्वासको समस्या दखिएको हो। उनलाई हिरासत कक्षमै अक्सिजन दिएर राखिएको प्रहरी स्रोतले जानकारी दिएको छ। संसद् सचिवालयकी कर्मचारी रोशनी शाहीलाई बलात्कार प्रयास गरेको आरोपमा महरालाई आइतबार साँझ प्रहरीले बालुवाटारस्थित सभामुख निवासबाटै पक्राउ गरेको..
काठमाडौँ, १७ असोज नेपाल रेडक्रस सोसाइटीद्वारा प्रदान गर्ने सेवा दशैँका बिदाको दिन पनि निरन्तर सञ्चालनमा आउने भएका छन् । सो अवधिमा विपद्को घटनाको व्यवस्थापन गर्न केन्द्रीयस्तरमा विपद् व्यवस्थापन विभागका उपनिर्देशक हरि मोहन श्रेष्ठको संयोजकत्वमा टोली सक्रिय रहने रेडक्रसले जनाएको छ । यसैगरी रक्तसञ्चार सेवा पनि नियमित रुपमै सञ्चालनमा आउनेछ । रक्त सञ्चार केन्द्रमा दैनिक छ जनाले ‘ड्यूटी’ गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । रक्त..
काठमाडौँ, १७ असोज स्वास्थ्य सेवाका समायोजनमा गुनासो गर्ने कर्मचारीको सङ्ख्या पछिल्लो पटक पाँचहजारको हाराहारीमा पुगेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले समायोजन भई पदस्थापनापत्र पाइसकेका कर्मचारीलाई कुनै गुनासो भए प्रमाण र कारणसहित निवेदन दर्ता गराउन आजसम्मको समयसीमा निर्धारण गरेको थियो । आज ३ बजेसम्ममा करीब चार हजार ९०० ले मन्त्रालयमा निवेदन दर्ता गराएका मन्त्रालयले जनाएको छ । आज गुनासो दर्ता गराउने अन्तिम समयसीमा..
काठमाडौँ, १६ असोज जति खेर पाए त्यति खेर भने चिया पिउनु उत्तम रहँदैन । किनकि, गलत समयमा चिया पिउँदा त्यसले स्वास्थ्यमा धेरै नकारात्मक असर पुर्‍याउन सक्छ त्यसैले आउनुहोस् चर्चा गरौँ आखिर कस्ता समयमा चिया पिउनु उचित हुँदैन त । बेड टी : जुन व्यक्तिको बेडमै बसेर चिया पिउने बानी हुन्छ, त्यस्ता व्यक्तिको शरीरमा एसिडको मात्रा मात्रै बढाउँदैन, मुखको स्वास्थ्यलाई पनि प्रभावित गर्छ । खानापछि..
काठमाडौं, १६असाेज । वीर अस्पतालका निर्देशक डा. केदार सेञ्‍चुरी महिनामा ५ लाख बराबरकाे खाजा खाने खुलेकाे छ । उनले एक महिनाको पाँच लाख रुपैयाँ बराबरको खाजा खर्चको बिल पेश गरेका हुन्। २०७६ को असारमा प्रशासनले बनाएको बिलमा सेञ्‍चुरीले चार लाख ६९ हजारको बिल पेश गरेको समाचार नागरिक दैनिकमा छ। प्रशासनले तयार पारेको बिलमा माइतीघरको अन्नपूर्ण क्याफेबाट दुई लाख ९० हजार र जी एण्ड..
चितवन, १५ असोज । जिल्लाका अस्पतालमा साउनयता उपचार गराउन आएकामध्ये स्क्रब टाइफसका कारण दुई जनाको मृत्यु भएको छ भने ९९ जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ । स्वास्थ्य कार्यालय चितवनका कीट नियन्त्रक राम केसीका अनुसार एक हजार २८ जनामा परीक्षण गरिएकोमा ९९ जनामा स्क्रब टाइफसको सङ्क्रमण देखिएको हो । स्क्रब टाइफसका कारण मृत्यु भएकामा एक जना गैंँडाकोटकी महिला र एकजना रौतहटका पुरुष रहेको केसीले..
Results 1452: You are at page 16 of 49